Momba anay - Mora Racing
IZANY MORA RAKOTANA INDRINDRA
Nanomboka tamin'ny taona 1994 avokoa tamin'ny alàlan'ny sarety kart tany Kerpen, Manheim: nipoitra tao aminay ny firehetam-po amin'ny fifaninanana kart. Efa hatrany am-piandohana dia nitondra kameran'ny marika Kali Kart isika - anio dia fantatra eran'izao tontolo izao ilay marika fa CRG ary tena mahomby. Raha resaka momba ny motera dia niara-niasa tamin'ny marika TM sy Pavesi izahay.
Hatramin'izay dia tsy mivadika amin'ny vokatra avo lenta isika mandraka androany. Nandritra io fotoana io dia mbola nataoko irery ny tena. Karting sy ny serivisy mifanerasera dia tsy matihanina sy sangan'asa tahaka ny ankehitriny. Izahay dia te-ho anisan'ity fampandrosoana ity ary noho izany dia nanangana ny Mora Racing tamin'ny 2000 mba hanomezana ny mpanjifanay amin'ny fisafidianana ny vokatra tsara indrindra, ary koa torohevitra sy fanampiana azo ampiharina. Tao anatin'izany firehetam-po izany dia nitombo ho an'ny iray amin'ireo magazay lehibe amin'ny Internet any Alemaina tao anatin'ny taona nanaraka. Ny mpanjifantsika dia mahafantatra ny antony.
Ankehitriny, ho an'ny faha-20 taona an-tsika, dia manolotra ny mpanjifanay ho namolavola indray ny traikefa an-tsakany sy an-davany kokoa ary azo antoka kokoa noho ny teo aloha. Noho izany dia matokia ireo manampahaizana amin'ny karting.
Ny talen'ny Mora Racing
IZAY IZY NO ATAO HOE AZY
"Mpiara-miasa tena mahay misy traikefa hazakazaka maro. Manampy amin'ny torohevitra sy hetsika ary fametrahana faritra.
TO-LIVE ao amin'ny Google
"Tsy afaka milaza afa-tsy ny zavatra tsara aho momba ny Mora-Racing. Wolfgang Mohr koa dia miezaka ny hanohana ny mpanjifa amin'ny maodely TM taloha !!! ... Thumbs up !!!"
"Famerenan'ny maotera ambony - toa ny vaovao aorian'ny fanarahana ny lozabe ary manana hery be dia be. Izy io dia mitondra mamirapiratra fotsiny. Asa ambony !!! Top shop !!"
NY ZAVATRA INDRINDRA INDRINDRA NO METY AN'I Etazonia
SADY TAMIN’NY FIVORIANA